မင်္ဂလာဆောင်ခါနီးမှာ ပြောချလိုက်တဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်းကြောင့် ပရိသတ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားသွားတဲ့ ယွန်းမြတ်သူရဲ့ ဗီဒီယိုလေး – Nyi Ma Lay
မင်္ဂလာဆောင်ခါနီးမှာ ပြောချလိုက်တဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်းကြောင့် ပရိသတ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားသွားတဲ့ ယွန်းမြတ်သူရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
By Ko AyePosted on February 22, 2022
လူငယ် တွေ ကြားမှာ ရေပန်းစား ခဲ့ကြတဲ့ အသည်းကွဲ သီချင်း တွေကို သီဆိုခဲ့ သူလေး က တော့ ယွန်းမြတ်သူ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်.. သူမ က တော့ “ နင်းလမ်း တွေ့ခဲ့ရင် ” သီချင်းလေး နဲက ပရိသတ် တွေရဲ့ အားပေး ချစ်ခင်မှုကို အပြည့် အဝရ ရှိခဲ့တဲ့ အဆိုတော် ယွန်းမြတ်သူ က တော့ ဒီနေ့မှာ သူ့ရဲ့ ချစ်သူ လေးရဲ့ ရွှေ လက်တွဲ သွားခဲပြီပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။
ယွန်းမြတ်သူ က တော့ သူရဲ့ ချစ်သူလေးနဲ့့ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၈) ရက် နေ့ မှာ မင်္ဂလာ မော်ကွန်း တင် လက်မှတ် ရေးထိုး ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါ တယ် ။ ယွန်းမြတ်သူ ရဲ့ မင်္ဂလာမော်ကွန်းတင် လက်မှတ် ရေးထိုး ပွဲလေးကို တော့ ပရိသတ် တွေရဲ က အချစ်တော် ဖြစ်တဲ့ အဆိုတော် မေခလာ တို့ စုံတွဲ လေးက တက်ရောက် ချီးမြှင့် ခဲ့ပြီး ယွန်းလေး ကို ချစ်ကြ တဲ့ ပရိသတ် တွေ က လည်း ပုံလေး တွေ ကို ကြည့်ပြီး ချစ်နေ ကြတာ ဖြစ်ပါ တယ် နော်
ဒီနေ့ လေးမှာ တော့ သူမရဲ့ ပရိသတ်လေး က ယွန်းလေး ကို မင်္ဂလာပွဲ ကျင်းပ ခါနီးမှာ ဘာပြော ချင် လဲဆိုတော့ လင်ရ ပြီဆိုပြီး အခွီလေး နဲ့ ပြန်လည် စနောက် ထားတာ ဖြစ်ပါ တယ်နော်..ယွန်းလေး ကို ချစ်ကြ တဲ့ ပရိသတ် တွေ က တော့ ဗီဒီယို လေးကို ကြည့်ပြီး ချစ်နေကြ တာ ဖြစ်ပါ တယ်နော် ပရိသတ် ကြီးလည်း ယွန်းလေး ရဲ့ ဗီဒီယို ကိုကြည့် ပြီး ချစ်ပေး ကြပါအုံး နော် . .
Source : Yoon Myat Thu
လူငယ္ ေတြ ၾကားမွာ ေရပန္းစား ခဲ့ၾကတဲ့ အသည္းကြဲ သီခ်င္း ေတြကို သီဆိုခဲ့ သူေလး က ေတာ့ ယြန္းျမတ္သူ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္.. သူမ က ေတာ့ “ နင္းလမ္း ေတြ႕ခဲ့ရင္ ” သီခ်င္းေလး နဲက ပရိသတ္ ေတြရဲ့ အားေပး ခ်စ္ခင္မႈကို အျပည့္ အဝရ ရွိခဲ့တဲ့ အဆိုေတာ္ ယြန္းျမတ္သူ က ေတာ့ ဒီေန႔မွာ သူ႔ရဲ့ ခ်စ္သူ ေလးရဲ့ ေရႊ လက္တြဲ သြားခဲၿပီပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ။
ယြန္းျမတ္သူ က ေတာ့ သူရဲ့ ခ်စ္သူေလးနဲ႔့ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၈) ရက္ ေန႔ မွာ မဂၤလာ ေမာ္ကြန္း တင္ လက္မွတ္ ေရးထိုး ခဲ့တာပဲျဖစ္ပါ တယ္ ။ ယြန္းျမတ္သူ ရဲ့ မဂၤလာေမာ္ကြန္းတင္ လက္မွတ္ ေရးထိုး ပြဲေလးကို ေတာ့ ပရိသတ္ ေတြရဲ က အခ်စ္ေတာ္ ျဖစ္တဲ့ အဆိုေတာ္ ေမခလာ တို႔ စုံတြဲ ေလးက တက္ေရာက္ ခ်ီးျမႇင့္ ခဲ့ၿပီး ယြန္းေလး ကို ခ်စ္ၾက တဲ့ ပရိသတ္ ေတြ က လည္း ပုံေလး ေတြ ကို ၾကည့္ၿပီး ခ်စ္ေန ၾကတာ ျဖစ္ပါ တယ္ ေနာ္
ဒီေန႔ ေလးမွာ ေတာ့ သူမရဲ့ ပရိသတ္ေလး က ယြန္းေလး ကို မဂၤလာပြဲ က်င္းပ ခါနီးမွာ ဘာေျပာ ခ်င္ လဲဆိုေတာ့ လင္ရ ၿပီဆိုၿပီး အခြီေလး နဲ႔ ျပန္လည္ စေနာက္ ထားတာ ျဖစ္ပါ တယ္ေနာ္..ယြန္းေလး ကို ခ်စ္ၾက တဲ့ ပရိသတ္ ေတြ က ေတာ့ ဗီဒီယို ေလးကို ၾကည့္ၿပီး ခ်စ္ေနၾက တာ ျဖစ္ပါ တယ္ေနာ္ ပရိသတ္ ႀကီးလည္း ယြန္းေလး ရဲ့ ဗီဒီယို ကိုၾကည့္ ၿပီး ခ်စ္ေပး ၾကပါအုံး ေနာ္ . .
Previous post သူမဘဝရဲ့ အချစ်ရဆုံးခင်ပွန်း ဆုံးသွားတာကြာပြီဖြစ်ပေမဲ့ တစ်သက်တာမေ့လို့မရတဲ့ အမှတ်တရပုံလေးတွေချပြလာတဲ့ ဒွေးရဲ့ ဇနီး
Next post ချစ်ရတဲ့ ချစ်သူလေးနဲ့ တရားဝင် ထိမ်းမြား လက်ထပ်လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ပုံတွေနဲ့တကွ ပရိတ်သတ်ကို Surprise တိုက်လိုက်တဲ့ ဝေဠုကျော်